Yakha I-imeyili Team Team Meambers | Database lakamuva Lokuposa
Ikhaya » Yakha Iqembu Lama-imeyili
Idathabheki yeMeyili yakamuva inamalungu eqembu le-imeyili labakhi be-imeyili abangama-10 abakha uhlu lwe-imeyili kumakhasimende ethu. Uma ucabanga ukuzakhela uhlu lwakho lwe-imeyili oqonde kulo ungakhetha noma yimuphi umuntu kusuka ngezansi bese umqasha. Uma uqasha umuntu kusuka lapha uzosebenza umsebenzi wakho. uzokwakha uhlu lwe-imeyili oluqondisiwe ngaphansi kwesidingo sakho.
Lapha wonke ama-meambers anolwazi olungaphezu kweminyaka engu-5 kuhlu lwama-imeyili akha umsebenzi.Bazokwakha uhlu lwakho lwama-imeyili olubhekiswe ngaphansi kwesidingo sakho. Uvele uqashe umuntu osuka lapha ubanikeze imiyalo ukuthi uluhlu luni ofuna ukulakha lapho i-meamber yethu izokwakha khona uhlu lwakho. Okubaluleke kakhulu lolu hlu lwehlukile futhi luzokuthengisela lona kuphela. Lolu hlu lungumnikazi wakho kuphela.
Hire Onolwazi Uhlu Lomakhi We-imeyili.
I-MD Rifat (Uhlu Lokuxhumana Namakhasimende) Amahora angama-40 asebenza $ 200
I-MST Asia (Uhlu Lwabathintwayo Labantu Ababhekiwe) Umsebenzi wamahora angama-40 $ 200
MD Monir (Yakha Uhlu lwe-imeyili B2B) amahora angu-40 asebenza $ 200
MD Razzak (Yakha Uhlu lwe-imeyili lwe-B2c) kusebenza amahora angu-40 $ 200
Ilungu Leqembu Lokuxhumana